China igwe na-emepụta igwe mmiri dị ọcha na ndị na-emepụta ihe | JUMP
igwe mmiri na-emepụta mmiri dị ọcha: Mmiri na-enweghị mmiri tank tankị mmiri na-ebuli elu ster quartz ájá nzacha carbon ihe ntanetị carbon na-arụ ọrụ ion ener softener na nzacha ziri ezi → osmosis njuputa, ntinye
The ụlọ ọrụ na-enye ndị na-esonụ zuru ezu tent nke akụrụngwa: 1. Obere na-ajụ-sized ịnweta mmiri na ọcha mmiri canning mmepụta akara 2000-30000 karama / h. 2. Ihe na-ekpo ọkụ na-ejuputa mmepụta nke ihe ọ juiceụ juiceụ na ihe ọ teaụ teaụ tii bụ karama / awa 2000-30000. 3. A na-emepụta ihe ọ Carụ Carụ na-egbu egbu site na isobaric na-ejuputa karama 2000-30000 / h.
(1) usoro izizi nke mbụ: a na-eji quartz sand ajụ filter iji mebie sedimenti, ajari, ihe ndị na-eme ka colloidal, ihe ndị a kwụsịrị na ihe ndị ọzọ na-emebi ahụ mmadụ na mmiri nwere ihe karịrị 20 μm. na akpaka nzacha usoro adopts dị dị ika akpaka akara valvụ, na usoro nwere ike na-akpaghị aka (aka) mepụta a usoro nke arụmọrụ dị ka backwash na-atụ flushing. Gbaa mbọ hụ na mmiri dị mma nke akụrụngwa ma gbatịa ndụ ọrụ nke akụrụngwa ahụ. N'otu oge ahụ, akụrụngwa nwere usoro mmezi onwe ya iji belata ụgwọ mmezi.
(2) nke abụọ ogbo pretreatment usoro: shei arụ ọrụ carbon nyo na-eji wepụ pigmenti, isi, biochemical organic okwu, mmapụta amonia uru, pesticide mmetọ na ndị ọzọ na-emerụ bekee na-emetọ mmiri. Automatic nyo akara usoro, iji dị dị ika akpaka akara valvụ, usoro nwere ike na-akpaghị aka (aka) mepụta a usoro nke arụmọrụ dị ka backwash, nti flushing, wdg
(3) usoro nke izizi nke atọ: a na-eji resin dị elu iji mee ka mmiri dị nro, ọkachasị iji belata ike mmiri, wepu calcium ion na magnesium (ọnụ ọgụgụ) na mmiri, ma mepụta resin nwere ọgụgụ isi. Akpaka nzacha usoro adopts dị ika akpaka mmiri softener, na usoro nwere ike backwash na-akpaghị aka (aka).
(4) usoro nke anọ nke usoro izizi: ọkwa nke izizi 5 μ m nke zuru oke (otu ọkwa n'okpuru 0.25 ton) ka akwadoro iji mee ka mmiri dịkwuo ọcha, bulie nsogbu na chroma nke mmiri, ma hụ na nchekwa nke usoro RO.
(5) akụrụngwa akụrụngwa nke akụrụngwa mmiri dị ọcha: a na-ewepụta teknụzụ osmosis maka ọgwụgwọ mmiri iji wepụ ihe ndị dị arọ na ihe ndị ọzọ na-emerụ ahụ mmadụ dị ka calcium, magnesium, lead na mercury, ma belata ike nke mmiri. Desdị nnu ọnụ ọgụgụ karịrị 98%, na mmiri mmiri dị ọcha nke na-eme ka ọkọlọtọ mba wee mepụta.
(6) sterilization system: ultraviolet sterilizer or ozone generator (kpebisiri ike dị ka ụdị dị iche iche) iji mee ka ndụ dị mma. Iji meziwanye mmetụta, ozone kwesịrị ịgwakọta na mmiri ma tinye uche ya na oke kacha mma.
(7) otu oge ịsa akwa: igwe anaghị agba nchara ọkara akpaka saa igwe na-ehicha iji hichaa ime na mpụta mgbidi nke kalama ahụ, a ga-agbanwezi mmiri ịsa ahụ.
Nke gara aga: Carbonated onunu na soda a drinkụ prodution igwe
Osote: Igwe nri mkpọ na akụrụngwa mmepụta Jam